SAWIRO: Min Florentino Perez, David Beckham Ilaa Roberto Carlos- Dadkii Caanka Ahaa Ee Ka Soo Qayb Galay Xafladii Sanadka Ee Arooskii Kabtan Sergio Ramos. - Gool24.Net
Kabtanka kooxda Real Madrid ee Sergio Ramos iyo xaaskiisa Pilar Rubio ayay xaafladood aroosku ka dhacday Seville Cathedral wuxuuna noqday aroos kulmayay dad badan oo kubbada cagta magac ku leh.
Kadib sanado badan oo ay Sergio Ramos iyo Pilar Rubio ay saaxiibo soo ahaayeen isla markaana ay isku soo dhaleen saddexda carruurta ah ee ah Sergio, Marco iyo Alejandro waxay ugu danbayn si rasmi ah u dhamaystireen qoysnimadooda.
Marti sharaf gaadhaysa 500 oo qof ayaa lagu casuumay xaflada arooska Sergio Ramos waxaana ka soo qayb galay dad badan oo kubbada cagta siyaabo kala duwan ugu lug leh.
Madax waynaha kooxda Real Madrid ee Florentino Perez ayaa ka mid ahaa shaqsiyaada ugu magaca wayn ee xaflada arooska Sergio Ramos ka soo xaadiray isaga oo suudh madow ku labisan.
Waxa kale oo dadka magaca lahaa ee xaflada arooska Sergio Ramos ka soo xaadiray ka mid ahaa David Beckham, Luka Modric, Nina Pastori, Pablo Motos iyo Sergio Busquets waxaana dhamaantood wehelinayay lamaanahooda.
Jordi Alba, Alvaro Morata, Santi Cazorla, Marco Asensio, Lucas Vazguez iyo xidigo badan oo Real Madrid iyo kubbada cagta Spain ka tirsan ayaa sidoo kale xaflada ka soo qayb galay.
Marti sharafta la soo casuumay ayaa goobta soo gaadhay 16:00 CET laakiin waxay xafladu bilaabantay markii ay saacadu soo gaadhay 18:30 CET.
Waxaa si wayn loo sugayay in la arko Pilar Rubio oo ku labisan dharka cad ee xafladaha arooska waxayna soo muuatay iyada oo dhinaca haysata aabaheed waxayna soo galeen Cathedral kadib waxaa la sugayay Sergio Ramos wuxuuna isna soo muuqday isaga oo hooyadadii dhinaca haysta.
Markii ay saacadu soo gaadhay 19:25 CET waxaa albaabka ka soo muuqday arooska iyo aroosada oo gacmaha is haysta waxaana halkaas ka bilaabatay xafladii ugu waynayd ee la sugayay in ay 500 ee qof ee la soo casuumay markhaati ka noqdaan.
Kadib waxaa Sergio Ramos iyo xaaskiisa Pilar Rubio loo galbiyay La Alegria SR4 halkaas oo ah beerta guriga Ramos waxaana dadka laga reebay telefoonada gacanta oo mamnuuca ka ahaa in goobta lala galo.
Halkan ka daawo qayb ka mid ah muuqaalka marti sharaftii arooska Ramoso iyo qaabkii ay waalidkooda xaflada ula soo galeen Ramos iyo Pilar.
💍⚽ Active and former football stars such as David Beckham with his wife Victoria flocked to the cathedral of Seville on Saturday to assist in the wedding of Real Madrid’s and Spain defender Sergio Ramos with Pilar Rubio. pic.twitter.com/bX1jlRcaVq
Haddii aan intaas ku soo dhaafno guud marka xafladii arooska Sergio Ramos, aan halkan idiinku dhaafo qaar ka mid ah sawiradii ugu shidnaa ee xaflada lagu qaaday.